Maqaal: Kevin de Bruyne Oo Ku Socda Inuu Abaalmarinta Ballon d’Or Kula Tartamo Xiddigaha Ay Gaarka U Noqotay Ee Lionel Messi & Cristiano Ronaldo - Laacib.net
Maqaal: Kevin de Bruyne Oo Ku Socda Inuu Abaalmarinta Ballon d’Or Kula Tartamo Xiddigaha Ay Gaarka U Noqotay Ee Lionel Messi & Cristiano Ronaldo
Muddo aan sidaas uga fogeyn sannad waxa uu Antoine Griezmann qofkii yiri: “Waxaan doonayaa inaan miis la soo fariisto Messi iyo Cristyiano Ronaldo islamarkaana aan ku dhawaado heerkooda.”
Ma jirin cid ku soo dhamaatay inay jabiso sida ay labada xiddig isku laheysiiyeen abaalmarinta Ballon d’Or tan iyo 2008, kaliya Xavi iyo Andres Iniesta ayaa ku dhameystay seddexda ugu sareysa in ka badan hal jeer.
Fernando Torres, Franck Ribery, Manuel Neuer, Neymar iyo Griezmann shaqsi ahaantiisa kaliya hal jeer ayay ka soo muuqdeen seddexda kaalin ee ugu sareysa Ballon d’Or sidaasi darteed ma jirin xiddig si toos ah u la tartama labadaan nin.
Hadaba Kevin de Bruyne ayaa noqon kara mid ku soo biira tartankaan, iyadoo tababarihiisa Pep Guardiola uu amaan ugu qubeeyay xiddiga hal abuurka leh ee khadka dhexe.
“Waa mid ka mid ah ciyaartoydii ugu fiicneyd ee aan abid tababaro” ayuu yiri Guardiola.
“Messi waa wax kale laakiin isaga dabadii De Bruyne ayaa jooga.”
Tababaraha xulka qaranka Belgium Roberto Martinez ayaa sidoo kale kalsooni ku qaba in ciyaaryahankii hore ee Wolfsburg uu gaari karo heerka Ronaldo iyo Messi.
“Waxa uu gaari karaa Messi iyo Cristiano” ayuu yiri Martinez.
Xaqiiqooyinka ayaana taageeraya sheegashada Guardiola iyo Martinez, tan iyo markii uu Premier League ku soo laabtay oo uu u dheelay Manchester City ma jiro ciyaaryahan sameeyay 33 caawin oo aan ka aheyn xiddigii hore ee Chelsea kaasoo sidoo kale mudadaas dhaliyay 16 gool.
Waxaana maalin walba sarre u sii kacaya maqaamka uu kaga jiro ciyaartoyda kubada cagta caalamka.
Wax walba uu garoonka ku sameeyo waxa uu ku sameeyaa sida ugu qiimaha sareysa, xitaa waxa uu goolal ku dhaliyaa cagta uu u liito ee bidix isagoo xerada ganaaxa banaankeeda ka soo toogta goolka.
Inkastoo uu bilowgii ahaa ciyaaryahan kaliya ku eg dhanka weerarka, Guardiola ayaa ka dhigay xiddig kala maamula khadka dhexe ee Manchester City.
Xilli ciyaareedkan 2017-18 waxa uu ciyaaryahanka reer Belgium kubada ka soo dhisayaa khadka dhexe, waxaana uu noqday hal abuurka kooxda Manchester City.
De Bruyne ayaana si fiican uga jawaab celiyay booskaan cusub ee la geeyay, waxaana uu yahay xiddiga ugu fiican Premier League ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan.
Haddii uu qaab ciyaareedkan la tago Champions League iyo Koobka Adduunka, waxa uu ku heer noqon doonaa Ronaldo iyo Messi.
Maqaalkaan waxaa lagu qoray jariirada Marca ee Spain ka soo baxda waxaana idiin soo tarjuntay